कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा पाएकोे नेपाली सेनाले एक महिना बितिसक्दा पनि सामान नेपाल ल्याइपुर्‍याएको छैन।
सेनाले चीन र भारतबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेपनि स्वास्थ्य उपकरण आउन भने ढिलाइ भइरहेको छ। चीनमा सरकारी बिदा परेकाले खरिद प्रक्रियामा भएको केही ढिलाइ भएको सामग्री नेपाल ल्याउन समय लागेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डे बताउँछन्।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद, सामग्री ल्याउन भइरहेको ढिलाइबारे र कहिलेसम्म सामग्री नेपाल आइपुग्छन् ? भन्ने विषयमा नेपाली सेनाका प्रवक्ता पाण्डेसँग काठमाडौं प्रेसका लागि सरिशा अछामीले गरेको संज्ञिप्त कुराकानी :
-कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री नेपाल ल्याउन किन ढिलाइ भइरहेको छ?
स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा सिधैँ जान सकिँदैन। स्वास्थ्य विभिन्न चरणको छलफलपछि चैत २५ मा मात्र स्वास्थ्य सामग्री खरिदका विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय भएको हो। खरिद प्रक्रियामा जान पटक– पटक छिमेकी मुलुक चीनसँग भिडियो कन्फेरेन्स गर्नु प¥यो। सम्झौता गर्न एक साताभन्दा बढी समय लाग्यो। हाल समान खरिद गर्ने अन्तिम चरणमा छौँ। अब छिट्टै सामान नेपाल आउँछ।
-चीनबाट ल्याउने भनिएका सामग्रीको खरिद प्रक्रिया कहाँ पुग्यो?
वैशाख ७ गते मात्रै चीनको सिनोफाम कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ। उसलाई त्यही दिन हामीले स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि भुक्तानी पठाएका थियौं। कम्पनीले भुक्तानी रकम पाएपछि वैशाख ९ गते ढुवानीको प्रक्रिया थालनी भएको हो। ढुवानीका लागि सम्झौता भएसँगै सबै प्रक्रिया सकिएको छ।
स्वास्थ्य सामग्री ढुवानीमा नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडीबाट र तातोपानी नाका हुँदै सडकमार्गबाट ल्याउने गरी सम्झौता भएको छ। वाइडबडीबाट ल्याउन ३ लाख ७२ हजार ५ सय अमेरिकी डलर र गाडीबाट ल्याउन दुई करोड ४६ लाख ७६ हजार ४ सय नेपाली रुपैयाँ दिने सम्झौता भएको छ। अब केही दिनमै सबै स्वास्थ्य सामग्री नेपाल आइपुग्छन्।
-पहिलो चरणमा चीनबाट कति सामग्री ल्याइँदैछ?
अतिआवश्यक साम्रगीहरु पीपीई, मास्क लगायत सामान पहिलो चरणमा ल्याउँदैछौँ। हवाइ मार्गबाट पहिलो पटक १८.७ टन र दोस्रो पटक २८. ८ टन गरेर ४५ टन बराबरको सामान ल्याउँछौं। बाँकी ३ सय ४२ टन सामान भने सडकमार्गबाट आउने छ।
-भनेपछि ती सामग्री कहिले काठमाडौं आइपुग्छन् ?
हवाइ मार्गबाट सामग्री ल्याउन केही समय लाग्छ। सडकमार्ग हुँदै आएका साम्रगी उताबाट हिँडेको ९ दिनमा काठमाडौं आइपुग्ने अनुमान गरिएको छ। ९ दिनमा आइपुग्यो भने वैशाख अन्तिमसम्ममा स्वास्थ्य साम्रगी काठमाडौं आइपुग्छ।
-स्वास्थ्य सामग्री नेपाल ल्याउन किन यति ढिलाइ भएको ?
नेपाली सेनाको एकल निर्णय नभएको र चीनमा मे १ देखि ५ तारिखसम बिदा भएकाले खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो। अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषदको निर्णय हुँदै प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालय पुगेपछि मात्र खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको हो।
खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन चीनका विभिन्न कम्पनीसँग छलफल, गुणस्तर परीक्षण लगायतका काम गर्नुपर्ने हुँदा ढिलाइ भएको हो।
-चीनबाहेक भारतबाट कति स्वास्थ्य साम्रगी ल्याउन थालिएको छ?
चीनबाहेक भारतबाट ५३ प्रकारका औषधि खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको छ। भारतबाट खरिद गर्ने भनिएका औषधिको लागि दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासबाट रकम बुझाएर खरिद गर्न पहल गरिएको छ।
-विमानस्थलबाट ल्याइने सामग्री कहिलेसम्म नेपाल आइपुग्छ?
सामग्री उत्पादन गर्ने ठाउँदेखि विमानस्थलसम्म आइपुग्न समय लाग्ने र विमानस्थलमा आइपुगेपछि परीक्षणका लागि ७२ घण्टाभन्दा बढी समय लाग्छ।
नेपाल र चीनको सम्बन्ध राम्रो छ। चीनले पटक–पटक सहयोग गर्छु भनेकाले चीनलाई स्वास्थ्य सामग्री छिटो पठाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि पत्र लेखेको छ। नेपाली सेनामार्फत पनि तत्काल सहयोग गर्न अपिल गरिएको छ। चीनले सहयोग गरेमा विमानस्थलबाट ल्याउने भनिएका सामग्री अबको एक सातामा आइपुग्छ।
Published Date: Sunday, 10th May 19:33:13 PM